Banyere Anyị - Hebei Tailian Fastener Manufacturing Co., Ltd.
The ụlọ ọrụ ugbu a nwere ihe karịrị 300 oru, technicians na-arụ ọrụ na mmepụta ụlọ ọrụ, kewara anọ isi ngalaba: ahịa ngalaba, ihe onwunwe akara center, mmepụta technology ngalaba, nchịkwa na pesonel ngalaba na ego ngalaba. Ngalaba a na-ere ahịa nwere nkewa ike, ngalaba nke ụgbọ njem, ngalaba fotovoltaic na ngalaba ndị ọzọ. Enwere ụlọ ọrụ Tibet, Guangxi office na Guangdong office. Companylọ ọrụ ahụ emejuputala echiche nke njikwa nke nkà mmụta sayensị na nkà na ụzụ na mmepe na-adigide, dabere na iwu mmepe nke ime ihe n'eziokwu na ịdị mma mbụ. Ọ nọgidewo na-enwe nnukwu ahịa ahịa na mba Jiaoan ngwaahịa ahịa ma sonye na ọkọnọ nke karịrị 200 mba isi ngwa-ngwa oru ngo dị ka Beijing, Hong Kong, Macao, Guangdong, Beijing, Kunming, Qingdao, Beijing, Shanghai na Guangdong. Kemgbe ntọala ya, ụlọ ọrụ a na-ejigide ọnụego ngwaahịa nke ihe karịrị 90% na nlele ngwaahịa dị mma nke Centerlọ Ọrụ Nnwale Nkwukọrịta nke Ozi na Ọzụzụ Nnyocha Abụ.
Ebumnuche anyị bụ "ịlanarị site na ịdị mma, imepe aha ọma, ịba uru site na ọrụ, na ibute ndị ọrụ ụzọ", na ịhazi nrụpụta n'ụzọ kwekọrọ n'ụkpụrụ mba yana mkpa onye ọrụ. Ana m akụ ihe akụrụngwa zuru oke na nke zuru oke, mma ngwaahịa dị mma, ngwaahịa a na-ere nke ọma na mba ahụ niile, merie ntụkwasị obi na otuto nke ndị ọrụ, nhọrọ nke Tailian Fastener Co., Ltd. ngwaahịa hà nhọta ịhọrọ ntụkwasị obi maka ọrụ owuwu ! Tylenol fasteners ga-enye gị ezigbo ọrụ na usoro a niile.
Anyị factory specializes na-amị: arịlịka bolt, stud kpọchie, U-bolt, U-hoop, ígwè nkwado, ígwè bolt, cylindrical ịgbado ọkụ ntu, na-ekpo ọkụ-itinye kpaliri bolt, ígwè ụlọ elu bolt, ụlọ ịghasa, site-mgbidi kpọchie, agbakwunyere ígwè efere, Ngwuputa kpọchie, aku usoro, pụrụ iche ekara akụkụ, wdg Anyị ụlọ ọrụ nwere ọtụtụ afọ nke mmepe na fastener nnyocha na mmepe, mmepụta, ahịa na ọrụ, na-akwakọba ọgaranya ahụmahụ arịlịka n'ichepụta, na-eke a otu injinia na technicians aku arịlịka bolt imewe na n'ichepụta na ahụmahụ frontline technicians. Na anyịnwa ịhụkwu nke ahịa akụ na ụba na-aga n'ihu ọganihu nke nhazi technology, anyị factory ji nkà na ụzụ ọhụrụ na ngwá ntaghari ohuru na-agbanwe agbanwe na onye ọ bụla na-agafe ụbọchị, na ya mmepụta ọnụ ọgụgụ na-eji nwayọọ nwayọọ na-ịgbasa. Ọ kpụrụ a dịtụ nnukwu metal nhazi enterprise tụnyere mmepe, mmepụta, n'ichepụta, mmezi na nhazi nke ntọala bolts, ulo oru na Ngwuputa ngwa na ụlọ ngwa usoro ngwaahịa, na-enwe kwa afọ imewe mmepụta ikike nke 50000 tọn na-enwe kwa afọ mmepụta uru nke banyere Yuan 500 nde. Companylọ ọrụ ahụ nwere nnukwu ụlọ ọrụ mmepụta ihe ọgbara ọhụrụ ma na-akwado akụrụngwa mmepụta yana ngwa atule zuru ezu. Ọ adopts elu-edu ngwaọrụ site na nnukwu ígwè mills na nnukwu mba ígwè mmepụta ụlọ ọrụ na mpaghara, na ana achi achi àgwà nke ihe mgbe nditịm ịchịkwa àgwà. Companylọ ọrụ ahụ agafeela asambodo njikwa njikwa usoro ISO9001.